Ị nwere ike ịgwa m ihe ederede SEO?
Ọ na-abịa na-enweghị ikwu na ọdịnaya bụ eze. M na-ekwu na ugbu a, ọ bụrụ na ịdee ederede ọ bụla, ị ga-elekwasị anya ugbu a ma ọ bụrụ na ị na-elebara anya na ndị na-agụ akwụkwọ na ndị na-achọ ya. Ijikọta njirimara abụọ ndị a ga - eduga n'ọkwá ka mma na nchịkọta ndepụta nke njikwa search engine nke Google (SERPs). Ya mere, olee otu esi emeri asọmpi n'igwe n'inwekwu ego maka inweta okporo ụzọ? Kedu ihe edere ederede SEO nke onye edemede ọ bụla nwere ike ịgụ? Ka anyị gbalịa ịchọta azịza ziri ezi - service experts corporate.
Gịnị bụ SEO edepụta ihe kacha mkpa otu?
Ịmepụta ọdịnaya dị mma na-amalite mgbe niile site na iji nyocha ọchụchọ kwesịrị ekwesị. Ọ dị mkpa iji ghọta ihe jikọrọ ọnụ na ịchọta site na nyocha ahụ n'ụzọ kachasị mma maka otu ikpe gị. N'ịme nke a, ana m akwado iji Ngwá Ọrụ ọ bụla a ma ama iji nweta nghota nke asọmpi na ugboro ole nyocha na-abịa na otu isiokwu ma ọ bụ ahịrịokwu nke ị na-atụle ka ị nweta maka mmalite nke ọdịnaya gị.
Ozugbo i nwere ndepụta zuru ezu nke isiokwu na ahịrịokwu nke igodo ị ga - eche ihu, lee anya ihe ndị dị n'okpuru ihe kachasị elu:
isi okwu na ndepụta okwu
Metadata, dịka meta utu aha, mkpado meta, ihe ngigide, wdg.
Njikọ dị mma, nke dị mkpa maka isiokwu mkpịsị ogologo ma ọ bụ ahịrịokwu
Ihe fọdụrụ n'ime ọdịnaya gị, ma ọ bụ ga-abụ "ebe okike" maka isiokwu gị iji "dị ndụ" na.
Gịnị bụ SEO edepụta ụzọ kacha mkpa abụọ?
Ka anyị kwuo banyere njupụta nke isiokwu ahụ. Ihe mbụ m ga - achọ ịdọ aka ná ntị banyere gị: ọ dịghị mgbe ị ga - ejikwa ọtụtụ okwu mkparịta ụka na mkpụrụokwu dị mkpirikpi mejupụta ọdịnaya gị, nke mere na ederede niile agaghị adị na ya. Ọzọkwa, nyere na ị na-agabiga ókè iji mee ka ọdịnaya gị sie ike, nke Google ga-eme ka algorithm mara "nri nri,.
Ya mere, enwere ngwọta ziri ezi iji nọgide na-enwe njirimara nke okwu kachasị mma? Ụfọdụ webmasters na-arụ ụka na a ghaghị ịchọta ya n'agbata pasent 3-7 maka ibe ọ bụla. Ma mụ onwe m, m chọpụtara na pasent 2-3 bụ ihe kachasị mma iji mee ihe nchịkọta nke nchịkọta ọchụchọ. Ọ bụrụ na ị ka na-ejighị n'aka ole ederede iji jiri, gbalịa ụfọdụ ntanetị maka nyocha, a ga-enyekwa gị atụmatụ nke onwe gị ịkwaga na.
Gịnị bụ SEO ederede ụzọ kacha mkpa atọ?
Ihe kacha mkpa, nke chọrọ nlezianya anya gị na ịnọgide na-enwe ahụmahụ nchọgharị mmadụ. Echere m na ọdịnaya gị ekwesịghị ịdị na-ede ederede ọ bụla. Chee echiche na ị ga-agbakwụnye ihe dị mma maka ọdịnaya ọdịnaya gị, mee ya dị ka ihe dị mkpa, zuru ezu na onye nwere omume enyi maka ihe na-akpali akpali ma dị mma. Isi ihe dị ebe a bụ ime ka ndị mmadụ na-ezo aka na ibe weebụ gị, jikọọ ya, kesaa ya, ma nweekarị isiokwu maka nkwurịta okwu ọha na eze na blọọgụ, forums, wdg.Ejikọtara ọnụ, M na-adụ ọdụ ka ị na-eche banyere ndị nwere ike ịgụ gị na mbụ. Ozugbo ọ gafere, ị ka nwere ike ịme ka ederede ederede gị ka ị mara nke ọma site na engines ọchụchọ.